Sheekooyinka ganacsiga. Geopois.com - Geofumadas
Maarso, 2021 Cartografia, Baridda CAD / GIS, Geospatial - GIS
Qoraalkan 6-aad ee Majaladda Twingeo Waxaan fureynaa qeyb loogu tala galay hal abuurka ganacsiga, markan waxay aheyd markiisii ​​Javier Gabás Jiménez, oo Geofumadas uu la xiriiray munaasabado kale howlaha iyo fursadaha lasiiyay bulshada GEO.
Thanks to taageerada iyo wadista bulshada GEO, waxaan ku guuleysanay in aan diyaarino qorshaheena ganacsi oo aan gaarno wajiga ugu dambeeya ee tartanka loo yaqaan 'ActúaUPM', in kasta oo aanan helin abaalmarin lacageed, waxaan sii wadnay awooddeena.
Maqaalka "Sheekooyinka Hal-abuurnimada: Geopois.com" waxaa qoray Javier laftiisa, halkaas ayuu kaga faalloonayaa qeyb ka mid ah bilowgii shirkadiisa ilaa uu ka noqday isku dhafka Geopois.com. Waxaan xasuusnaano in Geopois uu yahay Shabakad Bulsho oo isku xiran oo ku saabsan Teknolojiyada Macluumaadka Juqraafiyeed (TIG), nidaamyada macluumaadka juqraafiyeed (GIS), barnaamijyada iyo Khariidaynta Webka ”.
Waxaan dooneynaa inaan ka fogaanno waxa ay sameynayaan shirkadaha kale ee tababarka, waxaan u rogeynaa geopois.com shabakad bulsheed mowduuc leh oo ku saabsan qeybta GEO, gaar ahaan barnaamijyada juqraafiga iyo maktabadaha, oo leh mowduuc aad u gaar ah iyo isdhexgal aad u dhow oo dhexmara bulshadayada.
Tan iyo 2018, Gabás wuxuu faallo ka bixinayaa sida uu ku bilaabay fikradda ah "blog tiknoolajiyadda geopatial" ka dib markii uu dhammeeyay waxbarashadiisa injineernimada cilmiga geomatics iyo muuqaalka dhirta ee Jaamacadda Polytechnic ee Madrid iyo ka shaqeynta Startups iyo Multinationals.
Baaxadda suuqa falanqaynta cilmiga guud ee caalamiga ah ayaa la filayaa inuu ka kororto $ 52,6 bilyan sannadka 2020 illaa $ 96,3 bilyan sannadka 2025, sidaa darteed baahida loo qabo xirfadlayaasha cilmiga geospatial-ka ayaa lagu wadaa inay ku dhowaad labanlaabmaan
Tababar xirfadeed oo ballaaran, Javier wuxuu lahaa 5 deeq waxbarasho oo isaga siiyay shahaado iyo, wixii ka sarreeya, aqoonta farsamooyinka maaraynta macluumaadka sida barnaamijyada, SQL, Maya SQL, Juqraafiga Macluumaadka Nidaamka (GIS) oo ka caawiyay inuu helo saldhig uu ku abuuro Jirka.
Waxa aan u fidino isticmaaleyaasheena waa awooda kaqeybgalka iyadoo la abuurayo casharro iyada oo la adeegsanayo qaab dadweyne, sida OpenStreetMap uu sameynayo, tusaale ahaan. Waxaan ka taxaddarnaa waxa ku jira, waxaanna jecel nahay inaan daryeesho oo aan u siino adeegsadayaasheena aragtida ugu badan iyo sidoo kale koolkoolinta qorayaashayada oo aan u soo bandhigno degel xirfadle ah oo ay naftooda ku sheegi karaan.
Kala sooc sanado, waxay muujineysaa dadaalka dhammaan xubnaha Geopois inay kobciyaan shirkaddan oo si joogto ah fursado u siisa dhammaan falanqeeyayaasha iyo kuwa xiiseynaya xogta geospatial. Websaydhku wuxuu bixiyaa beddelaadyo waxbarasho iyo sidoo kale shabakad wada-hawlgalayaal ah oo lala xiriiri karo shaqooyin gaar ah oo la xiriira adduunka GEO.
Waxaan sanadka ku xirnay koritaan qaali ah marka la eego tirada booqashooyinka, in kabadan 50 casharro gaar ah oo ku saabsan teknolojiyadda geospatial, bulshada kobcaysa ee LinkedIn oo leh ku dhowaad 3000 raacsan iyo in ka badan 300 horumariyayaal geospatial ah oo ka diiwaangashan barteenna 15 dal, oo ay ku jiraan Spain , Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Guatemala, Mexico, Peru, Poland ama Venezuela
Marka la soo koobo, Geopois waa fikrad aad u xiiso badan, oo isku daraysa xaaladaha suurtagalka ah ee macnahan marka la eego bixinta waxyaabaha, iskaashiga iyo fursadaha ganacsi. Waqti wanaagsan oo loogu talagalay jawiga deegaanka ee maalin kasta waa mid aan la hubin ku dhowaad wax kasta oo aan ku qabanno nolol maalmeedkeena. Haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato shirkaddan, waxaad ka heli kartaa maqaalka adoo samaynaya riix halkan
Waxa kaliya ee haray ayaa ah inaan kugu martiqaadno inaad aqriso daabacaddan cusub, oo aan kuugu diyaarinay qiiro iyo kalgacal weyn, waxaan ku nuuxnuuxsaneynaa in Twingeo ay gacantaada ku jirto si aad u hesho maqaallo la xiriira Geoengineering ee daabacaaddaada soo socota, nala soo xiriir emaylka editor@geofumadas.com y editor@geoingenieria.com. Maxaad sugeysaa inaad soo dejiso Twingeo? Nagala soco LinkedIn si aad u hesho warar cusub.
Post Previous" Hore UNFOLDED: oo ah barxad cusub oo loogu talagalay maaraynta xogta dhulka
Post Next IMARA.EARTH bilowga oo cabiraya saameynta deegaankaNext »